Adɛn Nti Na Yehowa Adansefo Nni Buronya?
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Assamese Australian Sign Language Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Basque Bassa (Cameroon) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bosnian Boulou Brazilian Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Chuvash Cibemba Colombian Sign Language Croatian Czech Dangme Danish Digor Drehu Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Filipino Sign Language Finnish Fon French French Sign Language Ga Galician Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Hungarian Sign Language Iban Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Irish Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kabyle Kachin Kannada Karen (S'gaw) Kekchi Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Kwangali Kwanyama Kyangonde Lamba Latvian Lingala Lithuanian Low German Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mazatec (Huautla) Mende Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Ngangela Nias Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Polish Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Quichua (Chimborazo) Rarotongan Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Soli Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Swedish Sign Language Sãotomense Tagalog Tahitian Tamil Tankarana Tarascan Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tokelauan Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Valencian Venda Vezo Vietnamese Wallisian Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Isthmus) Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Nsɛm a nkurɔfo ka to yɛn so
Nea nkurɔfo ka: Yehowa Adansefo nnye Yesu nni, ɛno nti na wonni Buronya no.
Nokwasɛm: Yɛyɛ Kristofo, na yegye di sɛ Yesu Kristo nko ara na yɛnam no so benya nkwa.—Asomafo Nnwuma 4:12.
Nea nkurɔfo ka: Mokyerɛkyerɛ nkurɔfo sɛ mma wonnni Buronya, enti mode mpaapaemu ba mmusua mu.
Nokwasɛm: Mmusua ho hia yɛn paa, enti yɛde Bible boa nkurɔfo ma anigye ba wɔn mmusua mu.
Nea nkurɔfo ka: Buronya yɛ anigye bere. Obiara kyɛ ade, ɛma asomdwoe ba nkurɔfo ntam, na nkurɔfo yɛ afoforo papa. Buronya a munni nti, ne nyinaa bɔ mo.
Nokwasɛm: Daa yɛbɔ mmɔden sɛ yɛbɛkyɛ ade, na yɛne nkurɔfo tena asomdwoe mu. (Mmebusɛm 11:25; Romafo 12:18) Nhwɛso bi ni. Sɛnea yɛyɛ yɛn asafo nhyiam ne asɛnka adwuma no, ɛne Yesu akwankyerɛ yi hyia. Ɔkaa sɛ: “Munyaa no kwa, momfa mma kwa.” (Mateo 10:8) Bio nso, yɛboa nkurɔfo ma wohu sɛ Onyankopɔn Ahenni no nko ara na ebetumi de asomdwoe aba asaase so.—Mateo 10:7.
Yesu kaa sɛ ne wu na yɛnkae, ɛnyɛ n’awo.—Luka 22:19, 20.
Yesu asomafo no ne Kristofo a wɔtenaa ase tete no anni Buronya. Nhoma bi ka sɛ, “Afe 243 [Y.B.] akyi na Yesu awo ho afahyɛ no bae.” (New Catholic Encyclopedia) Eyi kyerɛ sɛ ɔsomafo a otwa to no wui no, edi boroo mfe 100 ansa na wɔrefi ase ahyɛ Yesu awo ho fã.
Biribiara nni hɔ a ɛkyerɛ sɛ wɔwoo Yesu December 25; Bible nka da a wɔwoo Yesu.
Yegye di sɛ Onyankopɔn ani nnye Buronya ho, efisɛ efi abosonsomfo amammerɛ ne wɔn amanne mu.—2 Korintofo 6:17.
Buronya nso, obi di a na ayɛ dɛn?
Nkurɔfo pii nim sɛ Buronya fi abosonsom mu na enni Bible mu nso, nanso wɔda so di. Ebia saa nkurɔfo no bebisa sɛ: Ade a obiara yɛ bi no, adɛn nti na Kristofo nko ara de wontumi nyɛ bi? Buronya nso, obi di a na ayɛ dɛn?
Bible tu yɛn fo sɛ ɛnsɛ sɛ yɛma obi dwen ma yɛn. Ɛka sɛ yɛmfa yɛn “adwene” nyɛ adwuma. (Romafo 12:1, 2) Ɛka kyerɛ yɛn sɛ yɛmma nokware no nsom bo mma yɛn. (Yohane 4:23, 24) Ɛnyɛ nea yɛpɛ ne sɛ nkurɔfo bɛkeka yɛn ho nsɛm. Nanso sɛ Bible ka sɛ yɛnyɛ biribi a yɛyɛ. Sɛ ɛno nti nkurɔfo bɛkeka yɛn ho nsɛm mpo a, ɛnhaw yɛn.
Ɛwom sɛ yɛn ankasa de, yenni Buronya, nanso sɛ obi bedi oo, sɛ ɔrenni oo, yɛnka ho asɛm. Sɛ nkurɔfo redi Buronya a, yɛnkasa ntia.
Dɛn na Bible Ka Fa Buronya Ho?
Sɛ wuhu Buronya amanne nsia ho abakɔsɛm a, ɛbɛyɛ wo nwonwa.
Buronya fi abosonsom mu. Wei nko ara nti, obi di Buronya a, ɛyɛ mfomso anaa?
Share Share Adɛn Nti Na Yehowa Adansefo Nni Buronya?
ijwfq ti 18
Adɛn na Ebinom Nni Buronya?
Yehowa Adansefo Tetew Mmusua Ntam Anaasɛ Wosiesie Mmusua?